Afọ ọzọ, akara ngosi ọzọ, ahụmahụ ọzọ pụrụ iche… Nke ahụ bụ YII2019 maka m! - Geofumadas
Mgbe a gwara m na m ga-enwe ohere ọzọ ka m soro na nnukwu ihe omume akụrụngwa nke afọ, o mere ka m tie mkpu ọ joyụ. YII2018 na London, karịa ịbụ otu n'ime ebe ezumike kachasị amasị m, bụ ahụmịhe na-enweghị atụ na mkparịta ụka pụrụ iche na ndị isi ụlọ ọrụ si Bentley Systems, Topcon na ndị ọzọ, okwu nkuzi dị omimi na usoro mmụta dị oke mkpa. Bentley Systems agbaghala echiche nke "ejima dijitalụ" na ụzọ kacha mma iji hụ mgbanwe na ụlọ ọrụ na-ewu ụlọ karịa ịnọnyere ndị na-ewu ụlọ n'onwe ha. Akụrụngwa mecca ekpokọtara ndị isi echiche sitere na ụlọ ọrụ ọ bụla yana ịkekọrịta ihe ọmụma, ịkparịta ụka na mmekorita nke merenụ karịrị okwu ọnụ.
Anọ m n'ebe kwesịrị ekwesị iji mee ka agụụ m nwee maka ide ihe banyere ụlọ ọrụ ihe owuwu. Site na Digital Advancement Academies iji mee ihe, Achọrọ m ijide ihe niile dị na ncheta m wee gbanwee ya ka ọ bụrụ akụkọ pụrụ iche. N'ịbụ onye jupụtara na ihe ọmụma, ozugbo m laghachiri, enwere m ike ịmepụta ụfọdụ ederede na-adọrọ adọrọ maka ndị na-agụ akwụkwọ m. Ọchịchọ izute stalwarts nke ụlọ ọrụ ihe owuwu na-esote afọ dị ndụ na nke ọma, niile karịa ebe ọ bụ na Singapore dị nso n'ụlọ. Naanị na elekere 5 na nkeji 55 nke oge ụgbọ elu, enweghị m ike ịhapụ ya!
Ọ bịarutere na Ọktọba 20, 2019 ma anọ m na mma Marina BaySands, Singapore. Mgbe m chọtara ebe a na-egwu mmiri dị na Rooftop Infinity, ịnụ ọkụ n'obi m dị okpukpu abụọ. Ọ bụ ihe ịtụnanya nke ụkpụrụ ụlọ n'onwe ya, dị ka obere obodo nwere nnukwu ụlọ ahịa, ebe ngosi, ebe ịgba egwu abalị, cha cha, ụlọ oriri na ọ foodụ notụ ...
Mediabọchị Mgbasa Ozi YII2019 nke a na-eche ogologo malitere n'ụtụtụ ọma nke October 21. Nnukwu mkparịta ụka nwere ume mere kpughere akụkọ dị mkpa dịka:
Bentley Systems na Topcon Positioning Systems weputara nkwonkwo ihe owuwu dijitalụ.
Bentley Systems kwalitere onyinye ndị Digital Cities site na inweta Citilabs na teknụzụ geospatial.
Ọrụ Owuwu Digital na-akpọsa obodo ibe ya na mmekorita ya na O3 Ngwọta iji kwado ọrụ nkwakọ ngwaahịa ọrụ dị elu.
Geofumadas abanyela na ihe omume a maka afọ 11, na nke m, ọ bụ oge nke abụọ na nke mbụ dịka akụkụ nke TwinGeo / Geofumadas magazine. Ajụjụ ọnụ a gbara ndị isi ọrụ na Bentley Systems bụ ahụmahụ na-akpali akpali nke gbasaa ihe ọmụma m gbasara ụmụ ejima dijitalụ, nkà na ụzụ nke ụlọ, injinịa nhazi, obodo dijitalụ, na ọtụtụ ndị ọzọ ...
Mkparịta ụka ịntanetị, njikọta na ndị enyi ochie na ndị ọhụụ na oge nri ehihie na oge nri tii mere oge ọ bụla ụtọ; Ejiri m n'ụzọ ziri ezi dị mkpa nke ụbọchị ahụ na tweet nke ghọrọ ihe ewu ewu.
Anọ m ebe a n na-ekpori ndụ n na-agbanwe oge ọ bụla .. afọ nke abụọ bụ ahụmịhe na-atọkwa ụtọ ☺️ #YII2019 @BentleySystems @GolgiAlvarez @christinebyrne pic.twitter.com/dNfIUrn82K
Thatbọchị gafere wee nwee mmemme oriri na ọquụ organizedụ ahaziri ahazi na Clifford Pier na-adọrọ adọrọ na Fullerton Bay Hotel.
Followingbọchị ndị na-esote, Ọktoba 22, 23 na 24 site na nnọkọ ACCELERATE na-atọ ụtọ, nkenke ụlọ ọrụ, nyeere m aka ịbanye ụwa nke Digital Twins. Mgbe niile na-ekpebi ịmara otu esi etinye ihe na mgbanwe mgbanwe na ụwa n'ezie, okwu eji ya na ihe ngosi ikpeazụ na-eme ka m mata. Abalị nke YII na nkwado ya na ịmụmụ ọnụ ọchị chọrọ aha pụrụ iche.
Nkwupụta ndị gbara ọkpụrụkpụ mere na ihe omume bụ:
Bentley Systems na-ewebata Ọrụ AssinWise Digital Twin Services na OpenUtilities Digital Twin Services maka akụ na arụmọrụ netwọk.
Klas nke Nke Gị na-ekwupụta njikọ nke usoro akwụkwọ ụlọ akwụkwọ na Bentley Systems.
Bentley Systems sonyere dịka onye otu mba - na-ekwupụta nkwado IFC maka ejima dijitalụ.
Bentley Systems kwuputara maka ọrụ igwe ojii igwe ohuru maka ihe eji eme onu ogugu nke dijital.
By Shimonti Paul, Onye nyocha, TwinGeo
Previous Post«Previous Ọrụ igwe ojii nke ohuru ohuru maka ihe eji eme ihe eji eme ihe ntanetị di na Twins Digital
Next Post Geo-Engineering & TwinGeo Magazine - Nke AbụọNext »